Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Warka Omicron Degdegga ah: Johnson & Johnson waxay ka dhigi karaan Pfizer iyo Moderna mid waxtar badan leh
Caafimaadka Warka • News
Kobciyaha Johnson & Johnson COVID-19, La maamulay Lix bilood ka dib Nidaamka Laba-qiyaas ee BNT162b2, wuxuu muujinayaa koror laxaad leh oo ku saabsan jawaabaha Antibody iyo T-cell.
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (Shirkadda) ayaa maanta ku dhawaaqday natiijooyin horudhac ah oo ka soo baxay daraasad madax-bannaan, oo ay ku jiraan qayb ka mid ah ka qaybgalayaasha daraasadda Janssen-sponsored COV2008, oo ay sameeyeen Dan Barouch, MD, Ph.D., et al. Xarunta Caafimaadka ee Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), taas oo muujisay in tallaalka xoojinta ah ee tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 (Ad26.COV2.S), oo la maamulo lix bilood ka dib laba-qiyaas oo aasaasi ah oo ah BNT162b2, waxay kordhisay labadaba antibody. iyo jawaabaha unugyada T-cell. Natiijooyinkani waxay muujinayaan faa'iidooyinka suurtagalka ah ee kor u qaadida heterologous (isku-dhafka iyo-kulan). Maqaalka qeexaya natiijooyinkan ayaa la dhajiyay medRxiv.
"Waxaa jira caddaymo hore oo muujinaya in habka isku-dhafka iyo isku-dhafka ah ee kor u qaadista ay ku siin karto shakhsiyaadka jawaab-celin difaaceed oo kala duwan oo ka dhan ah COVID-19 marka loo eego habka kor u kaca ee isku midka ah," ayuu yiri Dan Barouch, MD, Ph.D., Agaasimaha Xarunta Cilmi-baarista Virology iyo Tallaalka ee BIDMC. "Daraasaddan hordhaca ah, markii qiyaasta xoojinta Ad26.COV2.S la siiyey shakhsiyaadka lix bilood ka dib nidaamka aasaasiga ah ee tallaalka BNT162b2, waxaa jiray koror la mid ah jawaabaha antibody-ka usbuuca afaraad ka dib korriinka iyo kororka weyn ee Jawaabaha CD8+ T-cell oo wata Ad26.COV2.S marka la barbar dhigo BNT162b2."
"Natiijooyinkani waxay bixiyaan aragtiyo saynis oo qiimo leh oo loogu talagalay tallaalkeena marka loo isticmaalo xoojinta isku-dhafka iyo ciyaarta waxayna gacan ka geysan kartaa in la sheego xeeladaha kor loogu qaado ujeedada lagu xakameynayo masiibada," ayuu yiri Mathai Mammen, MD, Ph.D., Global Head, Janssen. Cilmi-baarista & Horumarinta, Johnson & Johnson. Xogtaasi waxay ku daraysaa tirada sii kordheysa ee caddaynta muujinaysa in isku darka-isku-dhafka ah ee xoojinta tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 uu si guul leh u kordhiyo jawaabaha kaftanka iyo jawaabaha gacanta ee ka soo horjeeda nooca asalka ah ee SARS-CoV-2, iyo sidoo kale Kala duwanaanshaha Beta iyo Delta."
Xogta Hese Wajiga 2 waxa lagu xoojiyay natiijooyin horudhac ah oo ka soo baxay UK COV-BOOST daraasad caafimaad oo lagu daabacay Lancet, kaas oo muujiyey in ka dib tallaalka aasaasiga ah ee laba qiyaasood midkood BNT162b2 (n=106) ama ChAdOx1 nCov-19 (n=108), qiyaasta xoojisay ee tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 ay kordhisay jawaabaha ka hortagga unugga iyo unugyada T-unugga labadaba.
Jawaabaha Cellular (T-Cell)
Daraasaddan hordhaca ah, oo lagu kobcinayo tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 ka dib nidaamka tallaalka aasaasiga ah ee BNT162b2 ayaa u muuqda inuu horseedayo koror weyn oo jawaabaha CD8+ T-unugyada marka loo eego kordhinta BNT162b2. Xogta jawaabta unugyada T-unuggu waxay soo jeedinaysaa kala duwanaanshaha jawaabaha difaaca ka dib kor u kaca isku midka ah ee BNT162b2, iyo xoojinta isku-dhafka iyo isku-dhafka ah ee tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 ka dib nidaamka aasaasiga ah ee BNT162b2.
Tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 wuxuu ka faa'ideeyaa Janssen's AdVac® tignoolajiyada iyo difaaca unug-dhexdhexaadinta, oo ay ku jiraan jawaabaha CD4+ iyo CD8+. Unugyada T-unugu waxay bartilmaameedsan karaan oo burburin karaan unugyada uu haleelay fayraska sababa COVID-19. Gaar ahaan, CD8+ T-unugyada waxay si toos ah u baabi'in karaan unugyada cudurka waxaana caawiyay CD4+ T-unugyada.
Jawaabaha Kaftanka (Antibody)
Labada tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 iyo BNT162b2 sidii kor-u-qaadayaashu waxay horseedeen dhexdhexaadin la mid ah oo lagu xidho heerarka antibody-ka lidka ku ah nooca SARS-CoV-2 ee asalka ah, iyo sidoo kale kala duwanaanshaha Delta iyo Beta, afar toddobaad kadib kobcinta. Si kastaba ha noqotee, ka dib qiyaasta xoojinta isku-dhafan ee isku-dhafan ee tallaalka Johnson & Johnson COVID-19, unugyada difaacayaashu waxay sii wadeen inay kordhaan ugu yaraan afar toddobaad halka shakhsiyaadka helay kor u kaca isku midka ah ee tallaalka BNT162b2, unugyada difaacayaasha ayaa hoos u dhacay toddobaadka laba illaa toddobaad. afar kor-u-qaadid.
Dhexdhexaadinta unugyada difaaca jirka ayaa awood u leh inay ku xidhaan fayraska si ay u xannibaan caabuqa oo ay fayraska ugu koobaan mareenka neef-mareenka sare. Isku-xidhka unugyada difaaca jirka waxay ku xidhi karaan borotiinka sare ee fayraska oo waxay hawl-geliyaan fayraska iyada oo loo marayo hawl-qabadyo ka-hortagga fayraska oo aan dhexdhexaad ahayn.
Daraasaddan, muunad biorepository ah oo ku taal Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) ayaa muunado ka heshay shakhsiyaadka qaatay tallaalka BNT162b2. Ka-qaybgalayaashu waxay sii wadeen dabagalka biorepository-ka waxaana lagu xoojiyay 30 ug BNT162b2 (n=24) ama waxay ku jireen daraasadda COV2008 (NCT04999111) waxaana lagu xoojiyay 5, 2.5, ama 1 × 1010 Vp ee tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 (n=41). Daraasadda COV2008 waa Johnson & Johnson oo ay kafaala-qaadeen, socota, indho la'aan waji 2 tijaabo caafimaad (VAC31518COV2008) si loo qiimeeyo tallaalkiisa COVID-19 si kor loogu qaado dadka waaweyn ee da'doodu tahay 18 iyo ka weyn.
Guddiga La-talinta ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Xarunta Maraykanka (CDC) ayaa ku talisay tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 inuu noqdo mid xoojiya dhammaan shakhsiyaadka xaqa u leh ee da'doodu tahay 18 sano iyo ka weyn ee qaata tallaalka COVID-19 ee la oggol yahay.
Johnson & Johnson waxay sii wadaan inay u soo gudbiyaan xogta la xidhiidha maamulayaasha kale, Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo Kooxaha La-talinta Farsamada Tallaalka Qaranka (NITAGs) adduunka oo dhan si ay ugu wargeliyaan go'aan-qaadashada xeeladaha maamulka tallaalka maxalliga ah, haddii loo baahdo.
Iyada oo lala kaashanayo kooxaha tacliinta ee Koonfur Afrika iyo adduunka oo dhan, Shirkaddu waxay qiimaynaysay waxtarka tallaalka COVID-19 ee noocyada kala duwan, oo hadda ay ku jiraan kuwa cusub oo si degdeg ah u faafaya. Omicron kala duwan. Intaa waxaa dheer, Shirkaddu waxay raadinaysaa tallaal kala duwanaansho gaar ah oo Omicron ah waxayna u horumarin doontaa hadba sidii loogu baahdo.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qaabka shirkadu u wajahdo dhinacyo badan oo ay ku caawinayso la dagaalanka masiibada, booqo: www.jnj.com/covid-19.
Isticmaalka la oggol yahay
Tallaalka Johnson & Johnson COVID-19, oo sidoo kale loo yaqaanno tallaalka Janssen COVID-19, ayaa loo oggolaaday isticmaalka iyadoo la raacayo Ogolaanshaha Isticmaalka Degdegga ah (EUA) ee tallaalka firfircoon si looga hortago Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-19) ee ay keento neef-mareenka daran cudurka coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
Nidaamka tallaalka aasaasiga ah ee tallaalka Janssen COVID-19 waa hal-dose (0.5 mL) oo la siiyo shakhsiyaadka da'doodu tahay 18 jir iyo ka weyn.
Hal Janssen COVID-19 Qiyaasta xoojisa tallaalka (0.5 mL) ayaa la siin karaa ugu yaraan 2 bilood ka dib tallaalka aasaasiga ah ee shakhsiyaadka da'doodu tahay 18 iyo ka weyn.
Hal dose oo xoojiya tallaalka Janssen COVID-19 (0.5 mL) ayaa la siin karaa shakhsiyaadka da'doodu tahay 18 sano iyo wixii ka weyn sida qiyaas xoojin ah oo kala duwan ka dib marka la dhammaystiro tallaalka aasaasiga ah ee tallaal kale oo la oggolaaday ama la ansixiyay ee COVID-19. Inta u dhaxaysa qiyaasta qiyaasta xoojisa heterolojisku waxay la mid tahay tan la oggolaaday ee qiyaasta xoojinta tallaalka ee loo isticmaalo tallaalka aasaasiga ah.
Ell bixiyaha tallaalka dhammaan xaaladahaaga caafimaad, oo ay ku jiraan haddii aad:
wax xasaasiyad ah ha yeelato
leeyihiin cillad dhiig-bax ama waxay saaran yihiin khafiifiye dhiig
ay yihiin kuwo difaaca jirkoodu hooseeyo ama ay ku jiraan daawo wax yeelaysa habka difaacaaga
aad uur leedahay ama aad qorsheyneyso inaad uur yeelato
waa naas nuujin
waxay heleen tallaal kale oo COVID-19 ah
weligood ma suuxdeen xiriir la leh irbad
Waa inaadan qaadan Tallaalka Janssen COVID-19 haddii aad:
ku yeeshay dareen-celin xasaasiyad daran ka dib qiyaas hore oo tallaalkan ah
ku yeeshay dareen-celin xasaasiyad daran wax kasta oo ka mid ah tallaalkan.
Tallaalka Janssen COVID-19 waxaa lagugu siin doonaa sidii muruqa lagu duro.
Tallaalka aasaasiga ah: Tallaalka Janssen COVID-19 waxaa la bixiyaa hal mar.
Hal dose oo xoojiya tallaalka Janssen COVID-19 ayaa la qaadan karaa ugu yaraan laba bilood ka dib tallaalka aasaasiga ah ee tallaalka Janssen COVID-19.
Hal qiyaas xoojin ah oo ah tallaalka Janssen COVID-19 ayaa la siin karaa shakhsiyaadka da'doodu tahay 18 jir iyo ka weyn ee dhammaystiray tallaalka aasaasiga ah ee tallaalka COVID-19 ee ka duwan la oggol yahay ama la ansixiyay. Fadlan kala xidhiidh bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga wakhtiga la qabanayo qiyaasta xoojinta.
Dhibaatooyinka kale ee laga soo sheegay Tallaalka Janssen COVID-19 waxaa ka mid ah:
Dareen-celinta goobta la isku duro: xanuunka, maqaarka oo guduudan, iyo barar.
Dhibaatooyinka guud: madax-xanuun, dareen daal badan, murqo xanuun, lallabbo, qandho.
Dareen aan caadi ahayn oo maqaarka ah (sida xiirid ama dareen gurguurasho) (paresthesia), hoos u dhaca dareenka ama dareenka, gaar ahaan maqaarka (hypoesthesia).
Dhagaha oo garaac joogto ah (tinnitus).
Waxaa jirta fursad fog oo uu tallaalka Janssen COVID-19 u keeni karo fal-celin xasaasiyad daran. Dareen-celinta xasaasiyadda daran waxay caadi ahaan ku dhacdaa dhowr daqiiqo illaa hal saac ka dib marka la qaato qiyaasta tallaalka Janssen COVID-19. Sababtaas awgeed, bixiyaha tallaalkaagu wuxuu ku weydiin karaa inaad joogto meesha aad ka heshay tallaalkaaga si aad ula socoto tallaalka kadib. Calaamadaha fal-celinta xasaasiyadda daran waxaa ka mid ah:
Bararka wajigaaga iyo cunahaaga
Finan xun oo jirkaaga oo dhan ah
Dawakhaad iyo daciifnimo
Dhiig -xinjirooyinka leh Heerarka hoose ee xinjirrada
Xinjiro dhiig oo ku lug leh xididdada dhiigga ee maskaxda, sambabada, caloosha, iyo lugaha oo ay weheliyaan heerarka hoose ee platelets (unugyada dhiigga ee jidhkaaga ka caawiya joojinta dhiigbaxa), ayaa ku dhacay dadka qaarkood ee helay Talaalka Janssen COVID-19. Dadka ku dhacay xinjirowga dhiigga iyo heerarka hoose ee platelets, calaamaduhu waxay bilaabeen qiyaastii hal ilaa laba toddobaad tallaalka ka dib. Warbixinta xinjirahan dhiigga iyo heerarka hoose ee platelet-ka ayaa ugu sarreeya dumarka da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 49 sano. Fursadda ay tani ku dhici karto waa fogaan. Waa inaad isla markiiba raadsataa daryeel caafimaad haddii aad leedahay mid ka mid ah calaamadaha soo socda ka dib markaad hesho Tallaalka Janssen COVID-19:
Neefta oo ku yaraata,
calool xanuun joogto ah,
Madax-xanuun daran ama joogto ah ama aragga oo xumaada,
Nabaro fudud ama baro yaryar oo dhiig ah oo maqaarka hoostiisa ah oo ka baxsan goobta la duray.
Waxa laga yaabaa in aanay kuwani ahayn dhammaan waxyeellooyinka suurtagalka ah ee tallaalka Janssen COVID-19. Saameyn adag iyo lama filaan ayaa dhici karta. Tallaalka Janssen COVID-19 weli waxa lagu daraaseeyaa tijaabooyinka caafimaad.
Guillain Barré syndrome (xanuunka neerfaha kaas oo habka difaaca jidhku uu waxyeeleeyo unugyada dareemayaasha, keena tabar-dari muruq iyo marmarka qaarkood) ayaa ku dhacay dadka qaarkood ee qaatay Talaalka Janssen COVID-19. Dadkan intooda badan, calaamaduhu waxay ku bilowdeen 42 maalmood gudahood ka dib markii la helay Talaalka Janssen COVID-19. Fursadda ay tani ku dhici karto aad bay u yar tahay. Waa inaad isla markiiba raadsataa daryeel caafimaad haddii aad isku aragto mid ka mid ah calaamadaha soo socda ka dib markaad hesho Tallaalka Janssen COVID-19:
Dareenka daciifka ah, gaar ahaan lugaha ama gacmaha, taas oo ka sii daraysa oo ku faafa qaybaha kale ee jirka.
Ku adkaanta dhaqdhaqaaqa wajiga, oo ay ku jiraan hadalka, calalinta, ama liqidda.
Aragti labanlaab ah ama awood la'aanta in ay dhaqdhaqaajiso indhaha.
Ay ku adag tahay xakameynta kaadiheysta ama shaqada mindhicirka.
Thomas Lash wuxuu leeyahay,
Hubi in alaabtani leedahay digniino badan iyo falcelin xun. Waxay ku dhowdahay sida Alex Baldwin ee ku jira duubista filimada. Waxaan runtii jeclaan lahaa inay joojiyaan tallaaladan oo ay helaan noole dhab ah, badbaado leh, waxtar leh oo daaweeya fayraska ama fayras kasta maadaama ay jiraan wax badan oo ka mid ah hubkan noolaha.